गोलमोलको ट्रेलर सार्वजनिक – fukuokanepal.news | सूचना र मनोरंजन को संगालो बोकेको नेपाली समाचार साइट
गोलमोलको ट्रेलर सार्वजनिक
admin 2017-10-16 मनोरंजनLeaveacomment
नेपालमा पछिल्लो समयमा सर्ट मुभी बन्ने प्रचलन बढ्दो छ । यसैबिच श्यामसुक्ला इन्टरटेन्मेण्टको ब्यानरमा नेपाली कथानक सर्टमुभी गनेलमोलको ट्रेलर युट्युवमा सार्वजनिक गरिएको छ । प्रस्तुत ट्रेलरमा हाँस्य ब्यङ्ग्यसँगै माया प्रितिलाइृ नै अगाडी सारिएको छ । फिल्मको निर्देशन राम बाँस्तोलाले गरेका छन् भने ननि केसीले छायङ्कन गरेका छन् । कलाकारहरुमा राम बाँसतोला, बिराज अधिकारी, बिशाल सुनार, रुपेश कार्की, सबिना थापा, बिकास शर्मा, कृष्ण कार्की, सन्दिप रेग्मी, बिकास गैतम आदिलाई पाउन सकिन्छ । ट्रेलरको अन्तिममा चलचित्र यहि कात्तिक १ गते बाट हाइलाइट्स नेपालको युट्युव च्यानलबाट सार्वजनिक गरिने जनाइएको छ ।
करोडोँ सहयोग पाइसकेका सागरले फेरी पाए ६० लाख, फेरी कसले दियो ६० लाख हेर्नुहोस भिडियो
वुद्धलाई घरबाट कत्ति भोट ? वुद्धका दाजुले खोले यस्तो कुरा(भिडियोसहित)
‘फाटेको जुत्ता’बाट के होला ? भिडियोबाट निकेशले अवार्ड नै अवार्ड पाएपछि